Nin Dhergay Dhalaan-kiisa Ma Oga ( Abdi-Shotaly)! – somalilandtoday.com
Nin Dhergay Dhalaan-kiisa Ma Oga ( Abdi-Shotaly)!
Ugu horeyn aniga way iga go’an tahay Somliland, ka looga baqanaayo ma aan ihi, waxan ahay ka u godoomay wadda jirka, sinaan-teedda iyo cadaalad loo siman yahay, kuwa ku af-gobaad-sadda wuu duminayaa, waa ka daabiin aan hal xalaal ah ku hadlayn, ee iyaka weeye kuwa burburi-nayaa, oo iyaga oo hoosta ku wata reer hebel, magaca Somaliland-na ku dhoobaystay, hadana afka boodhka soo marsanayaa. Ilaa inta aan arkaayo dal loo siman yahay, ha iga sugina in aan joojiyo xaq u dirirka ee kelya-hayga waan kaga baxaa, Karin cidhiidh-yoone, ha karaamo seegine, habaar lagu kari-waaye. Idinku ibriiqa aad ka adimay-saan ee uu dhabarku muuqdo derbi-yadda ka akhriya iyo munaafaqadda aan
isla garanayno. khiyaali iyo wax aan raan-dhiis lahayn yaan la isula iman, mid idiinku xeebanaaya ma aan ihiye. Waa wax maskaxdda ka weyn, oo yaabka laf-tiisii, uu ka sii yaabay, wax aan loo fadhyin, af-kala-qaad iyo u qaadan waa, ay wixii maqlaaba dhegaha faraha geliyeen, waxa ka soo yeedhay Ka kelyaha kuusan ee dawladda hoose ( Ma Kash-bacay la yidhaaho), oo ay ku heshiiyeen, askariga cirka ku faruur xidhan, kuwaas oo ku dhawaaqay, in la raro doono labadii guri ee maamuladdii hore ummadda u dhiseen ( Madax-weyne Daahir Riyaale haw badnaadee), dawladda hoose iyo Guriga madax-tooyadda, kuwaas oo kale ah:
(1) Madax-tooyadda oo ahayd meeshii uu ku noolaan jirey, wiilkii uu sodoga u ahaa keligii taliyihii Af-la-haar.
(2) Dawladda hoose ee Hargaysa, oo Iyana meelaha fara-ku-tirska ah, ee ka sii qiiqaaya Hantiddii ma guuraanka
ahayd, ee ummadu dhaxalka u lahayd, taas oo la dhisay casriggii Ingiriisku uu Xukumaayey Somaliland.
(3) Aqalka Baarlamaanka, oo kharash-kiisa ay bixisay EU-du ( Waa Ururka Yurube).
(4) Guriga Guurtidda oo Iyana sidoo kale ay dhistay EU-du.
Gurya-haas oo malaayiin doolar ay ku baxeen Dhisma-hoodda, oo uu feker-keedu uu lahaa, kana dambeeyey, Ilaaah khayr ha siiyo’e, Madax-Weyne Daahir Riyaale Kaahin, oo dalka inta uu ka qabtay, aan cid ka qabatay jirin, wixii uu dhisayna ay maamuladda Kulmiye ee kala dambeeyey, ay xaraash ku cuneen, wax ay dhaafeena aanay jirin, deked ilaa digo iyo dambas-na la iibiyey, si gaar ahna loogu dhaqaaleeyey jeegaanta, iyo kaba-qaadayaa-shoodda, afka iyo dhuunta wax ka arkaa. Markii la dhamaystay wixii kale oo dhan, ee ummadda dhex-yaalay, laga soo bilaabo Lawyacado ilaa Buurta Daallo, oo fooxii iyo dahabkii cid khaas ah la yidhi gurta, baddii, garoonaddii, diyaaradaha, khayraadkii shidaalka ee dhulka hoostiisa ku jirey, laga soo hoyday, baa hadda la yidhi, waxa inoo hadhay afarta qodob ee kor ku xusan, siddii looga takhalusi lahaa, balse ila eega wixii xaq iyo hor illaahay u hadlayaw, oo ka run sheega arimaha aan soo wado, doc-ka -yeedh iyo mid beelaysan, oo ku soo gabanaaya Somaliland, baa meel uu kaga dhacayaa Abdi-shotaly ku waraaqa-yee, iyaka oo kitaab reer hebel ahi uu u jaxaasan yahay, misana is leh meel kale farta ku fiiqa, wax-se soconaaya maaha.
Kuwa reer hebel sujuudda foodda dhulka u dhigaw, anigu illaahay baan caabudaa, cid aan u jooji-yaana ma jirto, ilaa iyo inta aan arkaayo cadaalad iyo sinaan, ummadda wadda saamaysaa. Ha igu daalina, wadna-haygu ma yaqaano galawda’e. Aan kuu keeno cadceedda hoosteeda’e, hoo waa tan xaqiiq-diiye. Akhristaw miyey suura gal tahay?In afar-taas guri loo raro daanta Askariga, dalka miyaan lala wadda lahayn? waxa weliba ka sii daran? Oo aan idin waydiinayaa arimahan hoos ku taxan, ee ka jawaaba, intiina daacadda ahi, biidhi-qaate iyo mid af qabiil ku hadlaaya, hadana raba in uu ku dedo Somaliland baa la duminyaa, isaga oo dhuunta loogu qooyey hantiddii laga xaday ummadda, weliba sidaas ku sacab garaacaaya, bay rabaan in ay kolba dhinac noo dhigaan, ma oga-se in aanu ka sii horeyno, kan uurka kuusan ee Ma Kash-Bacay ( Maayar ku sheega Hargaysa), oo ah buuraaday, oo siddii naylo barqo dhergay, fiririq-diisii laga fadhiyi la’yahay, ku kacayaa wax-yaabo qayrul-macquul ah, ilayn wuxuu ka dhigan yahay tafsiishii maah-maah-ddii ahayd ” Dameero isku halayn bay hooya-dood dabadda uga nuugaane” ha ka jawaabo su’aalahan af-janjeedha lahaaye, In dhergay dhalaan-kiisa ma oga, oo dadka kii dhergaw daran, lacagta lagu dhisaayo ha lagu hagaajiyo halka looga baahan yahay, oo ha la daayo si xun u ceeshka, lagu raad gadanaayo:-
(1) Maxaa ugu horeyn-ba loogu baahday in laga guuro guryahan? Waxba ma qabaane maxaa loo bedelayaa ee jira?, Aduunka oo dhan waxay ku yaalaan badh-tamaha caasimadaha wadanadda aduunka’e, kuwani maxay kaga duwan yihiin? Maxaa loogu diidayaa halka ay imika yihiin ee ka khaldan?
(2) Kharashaka ku baxaaya dhisma-yaasha lagu bedelaayo, xagee laga keenayaa? Ma mid la hayaabaa mise waa mid aduunka loo baryo tegaayo?
(3 Hadii la hayo bal ka soo qaadoo, hantiddda la geli-naayo ee xoogaas leh, ilayn waxa ku baxaaya malaayiin doolare, in ta lagu khasaaray-nayao meel aan dhibaato ka jirin ama ka aloosnayn, waxay u baahan tahay-na aanay jirin, xoolaha lagu baabi’inaayo, Maxaa wax loogaga qaban waayey wax yaabahan soo socdda?, Ha ka jawaabeen, kuwa xaq darradda ku difaacaaya reer hebel, ee ku marmarsoodda Somaliland baa la duminayaa, iyaka oo ah gacan-ku dhiigla-yaasha koowaad ee u dhameeyey, waana kuwan arimaha la doonaayo, in lagu xalilo kuwa wax lagu cunaayo inta loo ham iyo dig leeyahay:-
(a) Kharashka intaas leeg ee la gelinaayo rari-taanka, maxaa wax loogaga qaban waayey In cashuurta lagaga dhimo Ummadda sii bakhtiyeysa? Oo ay haddii uu maamul Jiro daacad ahi, loogu kabi waayey muceeshadda maalin-ba-maalinta ka dambaysa sii kacaysa? jawaabtu waxa weeye, haddii ay sidaas sameeyaan, wax la cuno la heli maayo, oo jeegaanta dani uguma jirto, markaa maxaa ka galay, waa jeebka iska buusada’e.
(b) Maxaa Biriijka Hargaysa ee sii liicaaya loogu dayac tiri waayey? kaas oo dhudhu-maddi uu ku joogay ( Waa tiirarkii uu ku taaanaaye) ay biyihii qodeen, lana tageen wixii hayey, dhawaana dhulka soo geli doona cisho aan fogayn? Iyana jawaabtu waxa weeye, haddii ay dayac tiraan, wax weyn oo ay ka dhex qaadaan uguma jiraan, markaa dan-tood maaha, waxa danta u ah dalka iyo dadka intoodda kale.
(c) Maxaa habeenkii laydh loogu samyan waayey Garoonka Diyaaradaha ee Caasimadda,? Si ay diyaaradahu u soo fadhiis-taan madawga habeenkii? Jawaabtu waxa weeye, horta yaa u jeedda in wax la qabto?, wax la boobo mooyaane. wax kale looma iman, mana wadaan, oo kuwo ku fekeraaya maaha wax qabta, ee caloosha iyo dhuunta baa isu furan tuugtan aanay waxba ka xaarantimay-sanayni.
(d) Maxaa wax looga qaban waayey, loona gelin waayey Biyaha iyo Laydhka ay daan keliyi leedahay?, Ee sadexdda daamood ee kale aan lagu ogayn, hadana lacag bilaash ah laga qaado, oo aanay isticmaalin, maxaa loogu balaadhin waayey si wax loo wadda qabo? ee loogu dhamays tiri waayey gebi ahaan-ba Hargaysa? jawaabtu waxa weeye, haddii aad adigu cabayso, oo aad haysato dabkii laydhka, Maxaa kaa galay meelaha beelaha kale degen yihiin, haddii aanay laydh iyo biyo-toona lahayn,? Adiga maxaa ku dhibay wax kaa maqani ma jiraane?
(e) Laami-yadda Dumbuluq, Axmed Dhagax, Qudhac-dheer, Maxamed Haybe iyo faras-magaalaha dhexdda, maxaa Iyana loogu dhisi waayey? Waxa weeye waxba kama gelin, oo iyaka ma khusayso, iyaka waxa u daran gacmaha iyo cagaha maxaad ku sii qaadaan oo keliya, kuwa aad noo sakhiray-saan waa kuwaas.
Waxan ku soo koobay akhrisatw maqaalkan, qofkii runta idiin sheegaa, waxa lagu tirinayaa reer hebel buu af-koodda ku hadlayaa, iyaka oo qabyaalad tii ugu xumaydi ay beer-koodda iyo wadnaha-ba googooysay, hadana burcad bay isu kaayo marina-yaan, ha igu daaline wadna-haygu ma yaqaano gabas-hadda loogu sujuudo xaq darrad’e. Aniga maaha ka loo duur xulaa ee la isaga soo dhigaa sidi-mul-dhukh-dda, kuwa qabyaaladda ku taageersan xaq darradda, iyo eexdda waa idinka, kuwa aasay magacii Somaliland ee ka dhigay dawlad goboleedka, beenta iyo wax aan jirin kula warwaree-gaaya shicibka, ah ayaxa kor iyo hoos ugu baxay dhulkii, ee mulukh ka siiyey, waa maamulka kulmiye iyo intuu cago ku jiito, waana la idin sheegayaa, oo wax la qarinayaa ma jiraane, joojiya geed sare waabka aad is leedihiin isku qariya, oo waa la isu badheedha-yaaye, cadaysta in aad xumaanta kuwa taayiradda u ah tihiin, inta qof daacad ah aad doonay-saan in aad ka leexi-saan dariiqa toosan, idinka oo dhex socdda ceebtii abid ugu foosha xumsyd, wax la isu dedayaa ma jiraan, ee beenta iyo qudhunka aad qooshay-saan miiska baa la soo dhigayaa.
N.B Milil Korkii nin dhayey, bay boogtu ku dilaacdaaye, u dakaysta xanuunka.